Soomaaliya: Madasha Siyaasiyiinta Puntland oo ka Jawaabtey Hadalkii Gaas
Soomaaliya: Madasha Siyaasiyiinta Puntland oo ka Jawaabey Hadalkii Gaas
Posted On 08-03-2018, 02:22PM
Kadib markaan dhageysaney waraysigii Madaxweynaha Puntland ee Idaacada BBC-du ka qaadaya shalayto;
1. Puntland Focus Group soo dhoweyneysaa, ugana mahadnaqaysaa Madaxweynaha Dawladda Puntland in soo dhoweeyey taladayadii, kuna dhawaaqay in doorashada Madaxweynaha Dawladda Puntland dhacayso January 8, 2019.
2. Puntland Focus Group waxaa ay ku baqaysaa in Madaxweynuhu mudada u dhiman xoogga saaro arrimaha amniga dalka iyo wadajirka bulshada.
3. Waxaan odayaasha dhaqanka ugu baaqaynaa inay xubnaha golaha wakiilada u soo xulaan dad karti iyo hufnaan leh, tixgelinaaya dareenka shacabka iyo xaaladda guud ee Puntland, diyaarna u ah inay hormuud ka noqdaan is-bedel dhaqan-dhaqaale, siyaasadeed iyo dib-u-curasho dhab ah oo Puntland.
4. Waxaan Mar kale Madaxweynaha xasuusinaynaa ilaalinta talooyinkii iyo qodobadii la xiriiray dastuurka iyo khayraadka ee aan ku soo saarray warqadahayagii koowaad iyo labaad ee Puntland Focus Group.
5. Waxaan Madaxweynaha si xushmad leh ugu baaqaynaa inuu talo balaaran, miisaaman oo loo dhan yahay, ka yeesho xubnaha xallinta khilaafaadka ee Golaha Shacabka Dawladda Puntland.
Cabdi Faarax Saciid ( Juxaa )
Cabdirisaaq Cabdulahi Jaamac (Jana Gale)